ကောက်ညှင်း၊ ပဲစေ့နှင့်ငှက်ပျောပေါင်းထုပ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Friday, December 13, 2013 Taunzalat
ပဲထွန်( သို.) ပဲနီ....................................၁/၂ ခွက်(................။.......)
ရခိုင်ငှက်ပျောသီး....................................၅ လုံး( ဒေါင်လိုက်၎ စိတ်)
ငှက်ပျောဖက်( ၅'x ၈').............................. ၂၀ ရွက်
ငှက်ပျောဖက်( ၄' x ၄' ).............................၂၀ရွက်
ကောက်ညှင်းဆန် နှင့် ပဲ ကို မုန်.မပြုလုပ်ခင် ၁ ည ကြိုတင်ရေဆေးစိမ်ထားပါ
ပဲကို ရေ ၃ခွက်ထည့်ကာ ရေခမ်းနှူးသည်အထိပြုတ်ပြီးအအေးခံထားပါ။
၈လက္မဖြတ်ထားသောငှက်ပျောဖက်ကိုအောက်ကခံပြီး ၅ လက္မကိုကန်.လန်.
ချက်ထားသောကောက်ညှင်း၁ ဇွန်း ၊ ပဲ ၁ဇွန်း(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)ထည့်ပြီး
ငှက်ပျောသီးစိတ်ကိုတင်ပါ။ ကောက်ညှင်း ၁ ဇွန်းနဲ.ပဲ၁ ဇွန်းကိုအပေါ်ကထပ်
၅ လက်မဖက်ကိုအရင်ခေါက်ပြီး..၈ လက္မ ဖက်ကို ခေါက်ချိုးခေါက်ပါ။
ထို.နောက်...၄ လက်မပတ်လည်ငှက်ပျောဖက်၂ ရွက်နှင့်ထပ်ထုပ်ပြီးဝါးနှီးဖြင့်
ပေါင်းအိုးမှာပေါင်းရင် (၃၀) မိနစ်( သို.) ရေမြှုပ်ရုံထည့်ထားတဲ့အိုးမှာပြုတ်ရင်